जसपामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव को बलियो ? यस्तो छ आन्तरिक समीकरण | Saptaritoday
Home राजनीतिक जसपामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव को बलियो ? यस्तो छ आन्तरिक...
जसपामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव को बलियो ? यस्तो छ आन्तरिक समीकरण
१९ बैशाख २०७८, आईतवार १४:३९
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक समीकरणमा देखिएको गडबडीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसद् पुग्न सकेको छैन ।
कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा कुन पक्ष बहुमतमा छ भन्ने यकिन हुन नसक्दा जसपाका ती दुवै निकायका बैठक अनिश्चित भए । लामो समयपछि १४ वैशाखमा छ जना शीर्ष नेताहरू बालकुमारीको पार्टी कार्यालयमा भेलासम्म भए ।
जम्माजम्मी १० मिनेटजति जुटेर संवाद गरेका उनीहरूले बैठकका लागि सहमति जुटाउन सकेनन् । त्यो भेटमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘बैठक बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ’ भन्ने सम्म अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई जानकारी गराए । तर, ठाकुर सहमत भएनन् र सरकारको निषेधाज्ञा अन्त्यपछि मात्रै बैठक बस्न सकिने अडानसहित छुटे ।
ठाकुरलाई साथ दिँदै आएका राजेन्द्र महतो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् ।
जसपाभित्र आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने अंकगणित नभएका कारण अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो बैठक टार्न खोजिरहेका छन् । छ सदस्यीय शीर्ष नेतामा पनि ठाकुर र महतो मात्रै छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने लाइनमा भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । अर्थात्, शीर्ष नेतामै ठाकुर पक्ष अल्पमतमा देखिन्छ ।
त्यसबाहेक प्रमुख शक्तिशाली निकाय कार्यकारिणी समिति हो । जहाँ ५१ जना सदस्य छन्, त्यस समितिमा यादव पक्ष नै बलियो देखिएको जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले दाबी गरे । ती नेताका अनुसार, ५१ सदस्यमा अहिले यादवको पक्षमा कम्तीमा ३१ जना सदस्य देखिएका छन् ।
पूर्वराजपाका २६ र पूर्वसमाजवादीका २५ सदस्यका रूपमा भागवण्डा भएको थियो । त्यस आधारमा यादवले आफ्ना पुराना २५ जना सदस्यलाई कायम राख्दै ठाकुर पक्षका महेन्द्रराय यादव र शरतसिंह भण्डारीसहितका केही नेतालाई आफ्नो पक्षमा तानेका छन् । शिलापत्र
महेन्द्र राय र शरतसिंहका तीन/तीन जना सदस्य छन् । त्यो हुँदा यादवको पक्षमा ३१ जना पुग्ने यादवनिकट ती नेताको दाबी छ । तर, ठाकुरनिकट एक नेताले भने महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष उपेन्द्रको निकट देखिए पनि शरतसिंह भण्डारी अहिलेसम्म ठाकुरकै पक्षमा देखिएको दाबी गरे ।
त्यसो हुँदा पनि कार्यकारिणी समितिमा अध्यक्ष यादवको पक्षमा २८ जना हुन्छन्, जुन संख्या कार्यकारिणी समितिको बहुमत हो । ठाकुरनिकट ती नेताले स्वीकार गरे, ‘हामीलाई अहिले संसदीय दलमाभन्दा पनि कार्यकारिणी समितिमा चाहिँ अप्ठेराे भएकै हो ।’
त्यसो त, राजकिशोर यादव पनि अध्यक्ष यादवसँग नजिक देखिएका छन् । दुवै पक्षका नेताहरूको समदूरीमा रहेका राजकिशोरलाई दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा गणना गरेका छन् ।
यता, संसदीय दलको अंकगणित पनि रोचक छ । यादवनिकट स्रोतका अनुसार, अहिले करिब २० जना सांसद अध्यक्ष यादवको पक्षमा छन् । पूर्वसमाजवादीका १६ जनासहित पूर्वराजपाका महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारीसहितका नेताहरू थपिँदा झण्डै २० जना पुग्नेछन् ।
यसरी पार्टी संरचनामा सबैतिर अल्पमतमा परेका कारण ठाकुर र महतो बैठकलाई टार्न खोजिरहेका छन् । तर, ठाकुरनिकट एक नेताले भने अहिले नै त्यस्तो अवस्था आइनसकेको बताए । ती नेताले भने, ‘अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पुराना १६ जना सांसद नै जोगाउन सकेका छैनन्, सातदेखि आठ जना सांसद पूर्वराजपासँग निकटमा छन् ।’
ती नेताको संकेतचाहिँ गत वर्ष वैशाखमा पार्टी विभाजनका लागि तयार देखिएका सात जना सांसद पूर्वराजपाको लाइनमा आएको दाबी छ ।
जसपाभित्र अहिले चाहिँ उपेन्द्र यादवले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्थामा आठवटा मन्त्रालय लिने सहमति भइसकेको चर्चा छ । गत वैशाखमा पार्टी छोड्न खोजेका ७सात जनामध्ये तीन जनालाई मन्त्री बनाउने र पूर्वराजपाका दुई नेतालाई मन्त्री बनाउने गरी आन्तरिक सहमति जुटेको जसपाभित्र चर्चा चलिरहेको छ ।
तर, लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको ४ घण्टा नबित्दै जसपाका तीन जना सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा लागेका कारण केन्द्रमा पनि विश्वासको वातावरण भनेको बनेको छैन ।
उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बहुमतको निर्णय गरेर ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा सामेल हुने पक्षमा उभिएका छन् । पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित नभएका कारण कार्यकारिणी समितिको निर्णय र निर्देशन नै संसदीय दलमा ह्वीपबराबर हुने व्याख्या यादव र भट्टराईको छ ।
कार्यकारिणी समितिमा बहुमतमा रहेका कारण यादव र भट्टराईको लाइन त्यस्तो देखिएपछि ठाकुर र महतोमा डर परेको चाहिँ उनीनिकट नेताहरूले कुराकानीमा स्वीकार गरे । यद्यपि, ती नेताको दाबीचाहिँ पार्टीको बहुमतले निर्णय गरेर बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि मतदानसम्म उनीहरू यादव र भट्टराईको पक्षमा हुँदैनन् ।
‘अहिले हस्ताक्षर गरे पनि मतदानको बेलासम्ममा उपेन्द्र यादवको पक्षमा आठ जनाभन्दा बढ्ता सांसद हुँदैनन्,’ उनले भने । शिलापत्र
पछाडि पोस्टधनुषामा १० दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी
अगाडि पोस्टतपाईंको माक्स खै ?वाइ सि एल नेपल सप्तकोसी नगर कमिटिद्वारा निशुल्क माक्स वितरण
“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ, नेता माधव नेपाल’बीच सिंहदरबार’मा वार्ता”
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का शीर्ष नेताहरुको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको
म संघियता बिरोधि हुँ, नेपालमा संघियता खारेज हुन्छःगोकुल बास्कोटा